Kulan diiradda lagu saaray kordhinta xarumaha sheybaarka Qaranka oo Muqdisho lagu qabtay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Kulan diiradda lagu saaray kordhinta xarumaha sheybaarka Qaranka oo Muqdisho lagu qabtay
Muqdisho: (SONNA)-Shirka joogtada ee Guddiga Qaran ee la tacaalidda safmarka Covid 19 oo W/wasaare Xasan Cali Kheeyre guddoomiyay ayaa diiradda lagu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda sheybaarka Qaranka, si ay u suurto gasho kordginta tirada dadka la baarayo ee gobollada dalka.
Intiisa badan waxaa shirkaan diirada lagu saaray hal qodob oo ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda sheybaarka qaranka, si ay u suurto gasho kordginta tirada dadka la baarayo ee gobollada dalka.
“Shirka joogtada ee Guddiga Qaran ee la tacaalidda safmarka COVID19 oo uu Ra’iisul Waaaare Hassan Ali Khairere guddoomiyay caawa ayaa diiradda lagu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda sheybaarka Qaranka, si ay u suurto gasho kordginta tirada dadka la baarayo ee gobollada dalka.” ayaa lagu qoraal ka soo baxay xafiiska Khayre.
Sidoo kale xubnaha guddiga la tacaalida Coronavirus ayaa soo jeediyey in deg-deg howshaas loo guda galo, si adeegyada sheybaarka loo gaarsiiyo meel badan oo dalka ah.
Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada uu fara ba’an ku hayo cudurka safmarka ah ee Covid-19 ee saameeyey caalamka, waxaana saacadihii ugu dambeeyey dalka laga diiwaan-geliyey illaa 95 qof, taas oo tirada guud ee xaaladaha ka dhigeysa 1,689 ruux.